Akara Mmanụ, O Ring, Valve Cover Gasket - GS
Ford New Holland traktọ valvụ Akara China ...
Automobile Viton High Quality agba Seals Chi ...
Silicon Red Rubber Nonstandrad O Ring Akara Man ...
Toyota Automotive Crank aro Rear Oil Akara Chi ...
Japanese Car Nissan Toyota valvụ Akara China Sup ...
Industrail aro Rotary Oil Akara China Manufac ...
Irrigator Valley Valmont GearBox Oem Oil Akara ...
Yiwu nnukwu akara roba ngwaahịa ụlọ ọrụ bụ ọkachamara akara ngwaahịa emeputa na ihe karịrị afọ 20 ahụmahụ na zhejiang China, Anyị nwere elu mma oru otu na roba Nwa room.Test ụlọ roba na rotation.seals etinyere na Automotive, ọgba tum tum, Industrail machhinery, Agriculture gaghị usoro na traktọ, ngwongwo mbupụ na Russia, USA, Germany, Iran, Mexico, New Zealand na na .Seals mmepụta OEM ahụmahụ na ISO / TS16949
Main ngwaahịa: mmanụ Akara, O yiri mgbaaka, agba agba, jaket. Valvụ mkpuchi jaket.
A otutu oge ihe engine ihihi bụ-apụghị izere ezere, Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji a ọjọọ mmanụ, E nwere ọtụtụ adịghị na mmanụ, Ọ bụghị nanị na ọ na-amụba iyi na dọkatụrụ adọka na engine, Ọ nwekwara ike ime ka engine mmanụ ehi ehi. Ka anyị tụlee maka ụfọdụ mkpọpu mmiri n'ime mkpuchi ụlọ valvụ. Kedu ihe kpatara ...
Ọdịiche nke iburu akara na okpu igwe Ọrụ bụ ihe dị iche - iburu mgbanaka akara bụ ịrụ ọrụ akara ya yana ndụ ọrụ nwere mkpa dị mkpa. - Iburu uzuzu uzuzu bu igbochi ibughari n'ime uzuzu na irighiri ihe ndi ozo na emetuta oru. Ihe dị iche, bụrụ ...
Akara Automobile Kwuru na akụkụ dị iche iche. enwere ike kewaa ya n'ime uzo ndi a dika akuku eji: Ntughari mmanu mmanu, akara mmanu crankshaft, engine engine engine, valvụ azuokokoosisi mmanụ, akara mmiri mgbapụta mmiri, akara mgbapụta mmanụ mmanụ, nnyefe mmanụ akara, akara mmanụ axle. wheel ehiwe ...
Combi Jcb traktọ aro Oil Akara China Manufac ...
TC roba egbugbere ọnụ mmanụ akara
Nnukwu nrụgide Ike gia mmanụ akara
Automotive aro mmanụ akara emeputa